Qayladhaan Dumar 6 - Codka Ubax
Waxa aan u baxay waxbarasho dalka Sudan ah, sannadkii 2014-kii, waana halka noloshaydu isku beddeshay. Waxa aan qaatay kulliyadda caafimaadka. Sidaas ayaan magaalada Khartuum u degay, aniga oo la noolaa oo meel la degganaa hablo Soomaali ah.
Maalin ayaa waxa iga xumaaday laptop aan ku shaqaynayay, inantii guriga ila joogtay ayaan weydiistay in ay cid uun iiga doonto laptop aan ku diyaariyo assignment muhiim ahaa. Wiil barta caafimaadka ilkaha oo aan gurigiisu naga fogeyn ayay la hadashay, waanay ka heshay oo iiga soo qaadday. Markii aan ku dhammaystay ayaannu u qaadnay oo u celinnay inankii, annaga oo wada soconna. Markaas ayaannu is aragnay inanka, waxaanu ii sheegay in aanan ka xishoon oo haddii aan u baahdo mar kale aan u soo doonto, maadaama ay haystaan saddex kale oo ay wada isticmaalaan. Sidaas ayaannu ku kala nimid.
Intaas wixii ka dambaysay dhawr maalmood ayuu guriga noogu yimid, waxaanu iga qaatay dhawr buug oo kala nooc ah. Ma sharaysan oo waa qof aannu isku caafimaad dhiganno, ardayna isku nahay. Maalin ayuu i soo wacay, waxaanu ii sheegay in uu daallan yahay oo aanu soo doonan karin, ee aan u soo qaado buug uu maalin dhoweyd miiskayaga ku arkay oo jarraaxaadka ka hadlaya. Waan u qaaday aniga oo aan wax dhib ah u arkayn, waanan u geeyay. Markii aan u tegay ayuu igu yidhi, soo gal. Anna ma geli karo qol nin leeyahay, waan ka cudurdaartay oo inaan noqonayo ayaan u sheegay. Wuu igu celceliyey, anna waan ka diiday. Inta uu i weydaartay, ayuu albaabkii debedda xidhay. Anigana khasab ayuu igu geliyay qolkii. Wuu iga da’ iyo xoogba weynaa oo intaa waan xarbiyayaa, balse awood ma lihi, iska maan celin karayn. Wadnaxanuun ayaan lahaa, markii aan naxay ee aan arkay waxa socdana, waan suuxay. Intii uu miyirkaygu maqnaa ayuu siduu doono iga yeelay, kufsi ayaanu igu la kacay.
Laba saacadood ka dib ayaan soo baraarugay. Xanuun badan ayaa i hayay, waxa dhacayana maan rumaysan karayn. Wuxuu igu yidhi, xidho dharka oo gurigiinnii tag, haddii kale anaa ku qaadayee i sug. Inta uu baxay ayuu albaabka dusha igaga sii xidhay. In yar ka dib ayuu igu soo noqday, gaadhi yar ayuu igu qaaday. Gurigayagii meel u dhow ayuu i dhigay. Wuxuu ii sheegay in haddii aan afkayga haysan waayo, aan anigu ceeboobi doono, “Waayo adiga ayaa gurigayga yimid, cidna ku rumaysan mayso. Anna waxaan ku doodi doonaa in aad i oggolayd.”
Aniga oo aan hadal u celin ayaan ka degay. Waxaan imid aqalkii oo inan keli ahi joogto. Saddex cisho waxbarasho ma tegin, hablahana waxaan u sheegay uun in wadnuhu i xanuunayo, maadaama ay cimiladu kululayd. Habeennimadii u horreysay, wuxuu ii soo diray muuqaal saddex daqiiqo ah oo uu iga duubay aniga oo bilaa miyir ah, mar kasta oo aan madaxa kor u qaadana, dhirbaaxo ayuu iga la dhacayay. Wuxuu ii sheegay in uu baahin doono haddii aan afkayga haysan waayo, sharaftaydana ay sidaa ugu dhammaan doonto.
Xanuunkii i hayay, hurdo-la’aan ayaa iigu biirtay. Asxaabta oo dhan ayaa guriga iigu iman jirtay, dhakhtarkuna wadnaxanuunka uun buu la tacaali jirey. Cidna ma ogeyn waxa igu dhacay.
Markii aan iska ladnaaday, ayaan wacay. Waxaan ku idhi, “Ilaahay ayaa wax walba arkaya, aniguna ku sheegi maayo, laakiin waxaan kaa codsanayaa in aanad muuqaalkaas iga baahin.”
Maalin walba waxa aan akhrisan jirey suurtul Nuur, Ilaahay ayaan ka ashkateeyey. Hablihii qolka ila degganaa xitaa uma sheegin, waana markii u horreysay ee aan ka warramo, 3 sanno ka dib maalintii ay dhacday. Maalmihii xajka ayuu i soo wacay, waxaanu ii sheegay in uu masaxay muuqaalkii, cafisna doonayo. Waan ku dhigay oo u maan jawaabin. Haddana laba bilood ka hor ayuu i soo wacay, u maan jawaabin. Waxa aan ka baqayaa haddii hadal xun aan ku idhaa, in uu baahiyo muuqaalkii.
Waxa laga yaabaa in ay dad badan is weydiiyaan sababta aan u dacweyn waayay, ama u sheegi waayay. Saddex sababood ayaan u sheegi waayey, waxaan is idhi waxa la odhan, maxaa iyada aqalkiisa geeyay. Waa ta labaade, waalidkay oo ii han weynaa oo waxbarasho ii soo diray, ayaan ka baqay in ay ogaadaan oo ay iga naxaan. Ta sadeexaad, ardayda maan dhex joogi kareen, waxna maan dhigteen haddaan cid u sheegi lahaa.